अमिताभ बच्चनसँग शाहरुख खानले किन लिन खोजे बदला ? « Khabarhub
अमिताभ बच्चनसँग शाहरुख खानले किन लिन खोजे बदला ?
मुम्बई – अचानक शाहरुख खानको एक ट्वीट इन्टरनेटमा भाइरल भयो । जसमा शाहरुख खानले अमिताभ बच्चनसँग बदला लिन लागेको बताएका छन् । उक्त ट्वीटमा शाहरुख खानले अमिताभ बच्चनलाई ट्याग नै गरेर आफूले बदला लिन आएको लेखे ।
शाहरुखले ट्वीटमा लेखे, ‘म तपाईंसँग बदला लिन आइरहेको छु साहेब, तयार रहनुस् ।’
त्यसपछि उनको ट्वीटलाई कोट गर्दै अमिताभ बच्चनले लेखे, ‘अरे भाइ, बदला लिने समय त बितिसक्यो, अब त सबैको बदला दिनेको समय आयो ।’
खास कुरा के रहेछ भने सन् २०१६ मा रिलिज भएको फिल्म ‘पिंक’ पछि फेरि एकपटक तापसी पन्नू र अमिताभ बच्चन ठूलो पर्दामा फेरि जादु चलाउन आउँदैछन् । फिल्म ‘बदला’ को ट्रेलर भोलि रिलिज हुँदैछ । ट्रेलर रिलिज हुनुभन्दा पहिले नै अमिताभले पनि जवाफ लेखे ।
अर्को ट्वीटमा अमिताभले लेखे, ‘बदला लिनु हरेकपटक सही हुँदैन र हरेक पटक माफ गर्न पनि सही हुँदैन ।’
Main aap se Badla lene aa raha hoon @SrBachchan saab! Taiyaar rahiyega…
यी दुवै स्टारले आफ्नो फिल्मको फरक तरिकाले प्रमोसन गरिरहेका छन् । यो फिल्मलाई शाहरुख खानको कम्पनी रेड चिल्लीले नै निर्माण गरेको हो ।
यो फिल्म मार्च ८ मा आउँदैछ । जुन दिन नेपालमा हलिउड फिल्म ‘क्याप्टेन मार्भल’ पनि रिलिज हुँदैछ ।
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार ४ : ५६ बजे